Orinasa fanamiana lamba | Mpanamboatra kitapo lamba any Sina, mpamatsy
Ireo mpanamboatra kitapo non tenona Shina dia miakanjo kitapo mpiaro miaraka amin'ny sary famantarana
Kalitao premium vita amin'ny fitaovana polypropylene tsy tenona, 100% Eco-Friendly & Recyclable
Lavorary ho an'ny fitehirizana na fandaminana ho an'ny hoditra, volom-borona, akanjo vita amin'ny akanjo, akanjo sy akanjo.
Fitaovana miaina sy tsy misy asidra ho an'ny fitehirizana maharitra - miaro amin'ny bobongolo
Kitapo akanjo fotsy fotsy kitapom-batsy ho an'ny lehilahy, kitapo akanjo azo atsipy ho an'ny akanjo
Fitaovana: vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba tsy tenona, mety amin'ny fitehirizana sy fikarohana. Size: namboarina (L * W * H)
Miaro akanjo: miaro akanjo amin'ny loto, vovoka ary samoina, mitazona ny fahadiovan'ny akanjo.
Zipper Design: Mampiasà zipper lava, mora raisina, ary apetraka amin'ny akanjo. Portable: Fahafahana lehibe, tena azo ampiharina, fikolokoloana akanjo tsara.
vidin'ny orinasa TSY misy kitapo akanjo MOQ misy paosy, kitapo akanjo natokana ho an'ny akanjo fampakaram-bady
Kitapo akanjo lava: Ireto harona akanjo ireto ho an'ny akanjo lava dia vita amin'ny lamba 100GSM tsy misy tenona avo lenta asidra mifoka rivotra. Arovy ny fitafianao amin'ny samoina sy vovoka, tazomy ny fitafianao mifoka rivotra sy madio ao anaty valizy, arimoara na fitoeram-panangonana
Clear Window: Ny varavarankely mazava dia manafoana ny tombantombana amin'ny fiezahana hamantatra izay ao anaty kitapo fitafianao 60-inch. Mpanaraka karatra plastika plastika ao anaty kitapo akanjo ho an'ny marika famantarana na kara-panondro. Mora sy mitsitsy fotoana.
Kitapo lamba rongony vita amin'ny landihazo misy sary famantarana
1. Lamba lamba rongony vita amin'ny landihazo maharitra
2. fitehirizana lamaody
3. Azo sasana ny toerana
4. fitehirizana tsy misy vovoka
5. Zipera mafy orina